Ny fivoarana eo amin'izao tontolo izao, izao tontolo izao maneran-tany Switzerland Switzerland (WKG)
Ny fahasoavan'Andriamanitra dia lehibe lavitra noho izao rehetra izao.
Raha namoaka ny teoria ankapobeny momba ny fahaiza-miaina i Albert Einstein zato taona lasa izay (tamin'ny 1916), dia nanova ny tontolon'ny siansa mandrakizay. Iray amin'ireo zavatra nahitana fahagagana indrindra nataony izay nifandraisany tamin'ny fanitarana tsy an'izao tontolo izao. Ity zava-misy mahatalanjona ity dia mampahatsiahy antsika tsy ny halehiben'izao rehetra izao, fa amin'ny filazan'ny mpanao salamo ihany koa: satria avo tahaka ny lanitra ambonin'ny tany, dia mampiseho ny fahasoavany amin'ireo matahotra azy izy. Tahaka ny halavitry ny atsinanana avy any andrefana dia miala amin'ny fahotantsika lavitra izany (Salamo 103,11: 12-XNUMX).
Eny, tena mahatoky tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny sorona an'ny zanany lahitokana, dia Jesosy Tompontsika. Ny firafitry ny mpanao salamo "hatreto atsinanana dia avy any andrefana" dia natao hihoatra ny saintsika lavitra noho ny habetsaky ny fiheverana. Vokatr'izany dia tsy misy olona afaka hieritreritra hoe hatraiza ny halalin'ny fanavotana ataontsika ao amin'i Kristy, indrindra rehefa handinika izay tafiditra amin'izany ianao.
Ny fahotantsika mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Saingy ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia nanova ny zava-drehetra. Ny elanelana misy eo amin'Andriamanitra sy isika dia mihidy. Ary Andriamanitra nampihavanin'izao tontolo izao ho azy ao amin'i Kristy. Asaina isika amin'ny fiarahany amin'ny fianakaviana, amin'ny fifandraisana tonga lafatra amin'ilay Andriamanitra telo mandrakizay. Maniraka antsika ny Fanahy Masina izy hanampy antsika hanatona azy sy hametraka ny fiainantsika eo ambany fiahiany mba hahafahantsika manahaka toa an’i Kristy.
Izaho Joseph Tkach
Ity dia fandraisana anjara avy amin'ny andian-dahatsoratra "Speaking of life".